प्रदेश ३ मा १०१ नर्सलाई जागिरको अवसर
हेटौँडा : एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश नं ३ ले स्थानीय तहमा नर्सका लागि रोजगारीको अवसर खुला गरेको छ। प्रदेश नं ३ का १३ जिल्लाका स्थानीय तहका विद्यालयका लागि १०१ नर्स नियुक्त गर्न लागिएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं ३ ले आज सूचना प्रकाशित गरी सेवा करारमा लिने जनाएको छ। सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि २१ दिन
पोग्बा पेनाल्टीमा चुक्दा म्यानचेष्टर युनाइटेड बराबरीमा रोकियो
काठमाडौं : नयाँ सिजनको इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको आफ्नो दोस्रो खेलमा म्यानचेष्टर युनाइटेड बराबरीमा रोकिएको छ। सोमबार राति भएको खेलमा म्यानचेष्टर युनाइटेड वुल्भससँग १–१ गोलको बराबरीमा रोकिएको हो। वुल्भसको घरेलु मैदानमा भएको खेलको २७औं मिनेटमा एन्थोनी मार्सियलले गोल गर्दै युनाइटेडले अग्रता लिएको थियो। तर, खेलको ५५औं मिनेटमा वुल्भसका रु
सर्वदलिय बैठक : शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन छलफल हुने, होलान् त प्रचण्ड खुशी ?
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज (मंगलबार) आह्वान गरेको सर्वदलिय बैठकमा बाँकी रहेको शान्ति प्रकृया टुंग्याउने विषयमा केन्द्रित हुने देखिन्छ । संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रकृया टुंग्याउनु पर्ने बताएका थिए । बैठक आज साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बस्दैछ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनि
चिकित्सकलाई कारबाहीको माग गर्दै जनकपुरमा प्रदर्शन
जनकपुरधाम : जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सक डा. आनन्द झालाई कारबाहीको माग गर्दै जनकपुरमा विद्यार्थीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । गत आइतबार चिकित्सक डा. झाको लापरबाहीका कारण जनकपुरस्थित डेफोडिल्स पब्लिक स्कुलके कम्प्युटर शिक्षक कुन्दन झाको मृत्यु भएको थियो । शिक्षक झाको पउचारका क्रममा निधन भएपछि विद्यार्थीहरुले चिकित्सकको कारबाहीको माग गर
सिंहदरबार भित्रै कर्मचारीले आत्महत्या गरे
काठमाडौं: राष्ट्रिय योजना आयोगका एकजना कर्मचारीले सिंहदरबारमै आत्महत्या गरेका छन्। कार्यालय समय सकिएर सोमबार राति ८ बजेको समयमा सिंहदरबार छिरेका नायव सुब्बा बच्चु केसी राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयको सानो अनुगमन हलमा मृत भेटिएका हुन्। कीर्तिपुरको टौदह घर भएका उनले हिजो बेलुकै विष पिएर आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्
बसले ठक्कर दिँदा भारतीय नागरिकको मृत्यु
नवलपुर : नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिकामा मङ्गलवार बिहान बसले साइकलयात्रीलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् । मध्यबिन्दु नगरपालिका –७, चोरमारामा काठमाण्डौबाट महेन्द्र नगरका लागि छुटेको ना ५ ख ४८६ नम्बरको बसले साइकलयात्री भारत मोतीहारी घर भई मध्यबिन्दु नगरपालिका –७, चोरमारामा प्लाष्टिक पसल गर
चितवन : पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा मुछिएका सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने सहित तीन जनालाई चितवन जिल्ला अदालत उपस्थित गराइएको छ । आज (मंगलवार) विहान दश बजे नै उनिहरुलाई अदालत पुर्‍याइएको हो । पाँच दिनको अनुसन्धान र बयानपछि छैठौ दिनमा अदालत उपस्थित गराइएको चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी दान बहादुर मल्लले जानकारी दिए । अदालत पेस गरिएकोमा
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ३० घण्टापछि संचालनमा
नवलपुर: अरुणखोला पुल भाँचिएपछि निर्माण गरिएको डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा अवरुद्ध पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ । डाइभर्सन मर्मत गरेर झण्डै ३० घण्टापछि मंगलबार बिहान एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । अहिले दुवैतर्फी सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वले जनाएको छ । गएको साउन २९ गते अरुणखोला पुलमा ट्रक ठोक्किएर पुल भाँच
दाङ : जिल्लामा एनसेलको टावरमा आगजनी भएको छ । गए राति अज्ञात समूहले शान्तिनगर गाउँपालिका-५ रगैँचामा रहेको टावरमाथि आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोदविक्रम शाहका अनुसार टावरको जेनेरेटर र तारमा क्षति पुगेको छ । टावरमा नेत्रबिक्रम चन्द समूहले आगजनी गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । यस विषयमा अनुसन्धान ग
काठमाडौं : जम्मू-कश्मीर मुद्दाबारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन् । ट्रम्पले ट्वीट गर्दै यसबारे जानकारी दिए । परिस्थिति अप्ठ्यारो भएपनि सकारात्मक कुराकानी भएको जानकारी ट्रम्पले ट्वीटरमार्फत् दिए । उनले लेखेका छन्, ‘मेरा दुवै साथीहरु भारतका प्रधानमन्त्